Izicelo - Zhejiang Tiantai Jierong New Material Co., Ltd.
Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-10 yezulu lobuchwepheshe, izikhwama zethu zenyiloni, i-PET, nezommbila we-corn fiber azinabo ubuthi, azinabhaktheriya futhi azimeli ukushisa ngokuhlolwa kwezokuphepha kuzwelonke, sezivele zisezingeni lokuhola lasekhaya.
Iphrinta yeSilika Screen
Izindwangu zethu anezikhala nazo kabanzi emkhakheni kwesikrini wokunyathelisa anezikhala.
Isibonelo: umkhakha we-elekthronikhi, izimboni zobumba nezimboni, imboni yokupakisha, umkhakha wengilazi, umkhakha wezindwangu, umkhakha we-photovoltaic, njll.
I-Organza luhlobo lwentambo ekhanyayo enokuthungwa okusobala noma okuguqukayo. Abantu baseFrance basebenzisa i-organza njengezinto ezibonakalayo eziyinhloko ekuklanyeni izingubo zomshado. Ngemuva kokudaya, umbala uyakhanya futhi ukuthungwa kukhanya, kufana nemikhiqizo kasilika. Ingasetshenziswa futhi njengamakhethini, izingubo, imihlobiso kaKhisimusi namaribhoni.
Imboni yezokuhlobisa yezakhiwo manje inezidingo eziphakeme futhi eziphakeme zobuhle besikhala. Ekukhetheni izinto zokwakha umhlobiso, kuyadingeka futhi ukuhlangabezana nesisekelo esithile sobuhle bokwakha ngekhwalithi enhle kakhulu. Futhi indwangu yethu enezikhala ingasetshenziswa kabanzi ezinhlelweni zokwakha.
Indwangu yethu enezikhala nayo ingahlala endaweni emkhakheni wezokukhiqiza kwezimboni.
Kubandakanya: izihlungi nezikhwama zokuhlunga zemboni yamakhemikhali, imboni yokudla, ukuvikelwa kwemvelo, isayensi yokuphila, njll.